टिम चौराह धनगढी र काठमान्डौ गोल्डेन्स डि पि एल को तेश्रो दिनको खेलमा बिजयी !! | Cricket Himalaya |
By Bhanu Sigdel Last updated Jun 20, 2018 2,472 0
डीपीएल अन्तर्गत आज सम्पन्न खेलहरुमा टिम चौरहा धनगढी र काठमान्डौ गोल्डेन्स बिजयी भयका छन !
पहिलो खेल : टिम चौराह धनगढी भर्सेस सि वाइ सि अत्तरिया
सोमपाल कामीले अन्तिमतिर विस्फोटक ब्याटिङ गरेपछि टिम चौराह धनगढीले सिवाइसी अत्तरियालाई ३ विकेटले पराजित गरेको छ।
सोमपालले १५ बलमा ३९ रनको इनिङ खेल्दै टोलीलाई जित दिलाएका थिए। सो क्रममा उनले ३ चौका र ३ छक्का प्रहार गरेका थिए यस्तै धनगढीको जितमा रोहन मुस्तफाले ४० रनको योगदान दिए। खेलको म्यान अफ द म्याच सोमपालले १० हजार नगद पाए।
त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङमा उत्रेको अत्तरियाले निर्धा्रित ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ५० रन बनाएको थियो।
अत्तरियाका लागि विपिन चन्द्रा र प्रेम तामाङले सर्वा्धिक २८ रन जोडे। यस्तै, कुशल भुर्तेलले २५ र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १९ रन जोडे। उनीहरुसँगै कृष्ण कार्कीले १४, गौरव चितकारा र सुवास खकुरेलले समान १३ रन जोडे।
बलिङ तर्फ धनगढीका ललितसिंह भण्डारीले सर्वा्धिक तीन विकेट लिए। ४ ओभरको स्पेलमा उनले २४ रन खर्चे। धनगढीका विदेशी खेलाडी तथा यूएईका कप्तान रोहन मुस्तफाले २ विकेट लिए। ४ ओभर बलिङ गरेका उनले १ ओभर मेडन राख्दै ३५ रन खर्चेका थिए। यस्तै, सामसद शेख र सोमपाल कामीले समान १ विकेट लिए।
दोश्रो खेल : काठमाडौ गोल्डेन्स भर्सेस रुपन्देही च्यालेन्जर्स
रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग(डीपीएल)–२ मा काठमाडौं गोल्डन्सले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। गोल्डन्सले सोमबार रुपेन्देही च्यालेन्जर्सलाई ६३ रनले पराजित गर्दै दोस्रो जित हात पारेको हो।
काठमाडौं गोल्डन्सले दिएको १ सय ८७ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा निर्धारित २० ओभरमा सवै विकेट गुमाएर रुपेन्देहीले १ सय २३ रन मात्रै जोड्न सक्यो।
काठमाडौं गोल्डन्सले दिएको १ सय ८७ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा १८.४ ओभरमा सवै विकेट गुमाएर रुपेन्देहीले १ सय २३ रन मात्रै जोड्न सक्यो।
उसका ओपनर प्रदीप ऐरीले अर्धशतकीय पारी खेल्नुबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। प्रदीपले ३६ बलको सामना गर्दै ५७ रन जोडेका थिए। सो क्रममा उनले ५ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे। यस्तै सागर पुनले १८ तथा दीपक प्रसादले १० बाहेक अन्यले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन्।
रुपेन्देहीका रासिद खानले ४ विकेट लिए। किफायती बलिङ गरेका रासिदले २.४ ओभरमा ४ रन मात्रै खर्चे। उनीसँगै ललितनारायण राजबंशीले ३ तथा साहब आलमले २ विकेट लिए।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौंले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १ सय ८६ रन जोडेको छ। उसका भारतीय खेलाडी सन्नी पटेलले ३२ बलमा ४८ रनको पारी खेलेका थिए। सो क्रममा उनले ५ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे।
यस्तै, सुबोधकुमार भाटीले ४२, अमित श्रेष्ठ र नरेश बुढाऐरले समान ३० रन जोडे। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ले २० र भुपेन्द्र थापाले १४ रन जोडे। रुपेन्देहीका अमरसिंह रौटेला, विक्रम भुषाल र सुफायन मोहम्मदले समान १ विकेट लिए।
खेलको म्यान अफ द म्याच सन्नी पटेल भए । उनले नगद १० हजार पाए।
DPLKathmandu GoldensTeam Chauraha Dhangadi